Buzz, Viral or Okwu Ọnụ Marketing: Kedu ihe dị iche? | Martech Zone
Buzz, Viral or Okwu Ọnụ Marketing: Kedu ihe dị iche?
Tuesday, April 14, 2015 Monday, April 13, 2015 Douglas Karr
Dave Balter, onye guzobere Onyeka Onwenu, na-arụ nnukwu ọrụ n'ịkọwa ọdịiche dị na Buzz, Viral na Okwu Ọnụ Ahịa na mbipụta a nke ChangeThis. Nke a bụ nkọwa na nnukwu nkọwa Dave:
Gini bu Okwu nke ire ahia?
Okwu Agụ Ahịa (WOMM) bu okwu kachasi ike n’uwa. Ọ bụ ịkekọrịta otu echiche banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ n'etiti ndị ahịa abụọ ma ọ bụ karịa. Ọ bụ ihe na - eme mgbe ndị mmadụ ghọrọ ndị na - akwado nkwado akara. Ọ bụ grail dị nsọ nke ndị na-ere ahịa, ndị isi na ndị ọchụnta ego, ebe ọ nwere ike ịme ma ọ bụ mebie ngwaahịa. Igodo nke ya ịga nke ọma: ọ bụ eziokwu na eke.
Gini bu Viral Marketing?
Ahịa Viral bụ mgbalị iji zipu ozi ahịa na-agbasa ngwa ngwa na ngwa ngwa n'etiti ndị na-azụ ahịa. Taa, nke a na-abata n'ụdị ozi email ma ọ bụ vidiyo. N'adịghị ka ụjọ na-atụ egwu, nje abụghị ihe ọjọọ. Ọ bụghị emeghị ihe n'eziokwu ma ọ bụ ihe na-ekwekọghị n'okike. N'ihe kachasị mma, ọ bụ okwu ọnụ enyere aka, yana nke kachasị njọ, ọ bụ ozi mgbasa ozi ọzọ na-egbochi.
Gịnị bụ Buzz Marketing?
Zụ ahịa bụ ihe omume ma ọ bụ ọrụ na-eme ka ọha na eze mara, obi ụtọ, na ozi nye onye na-azụ ahịa. Ọ na-abụkarị ihe na-agwakọta ihe wacky, jaw-dropping event ma ọ bụ ahụmịhe with branding branding, dị ka ịka akara n'egedege ihu gị (ma ọ bụ ịnyịnya ibu gị, dị ka ụlọ ọrụ ahụike NYC mere n'oge na-adịbeghị anya). Ọ bụrụ na a na-eme mkpọtụ nke ọma, ndị mmadụ ga-ede banyere ya, yabụ ọ bụ nnukwu ụgbọ ala PR.
Nke a bụ ozi na-enweghị atụ na Okwu Ọnụ Ahịa (WOMM) site na Lithium:
Tags: uzu ahialithiummalitere ịrịa ahịaụmụ nwanyịNwaanyịokwu onuire okwu onu
5 Key weebụsaịtị Metric Kategorien I Kwesịrị Inyocha
Kedụ ka I Ga-esi Tụta Mmetụta Algọridim Nchọgharị Mobile?
Jun 17, 2008 na 9:41 AM
Maka m, echere m na Okwu ọnụ bụ ụdị azụmaahịa magburu onwe ya, mana ọzọ, echere m na ọ laghachi n'ihe ndị mmadụ na-ekwu maka gị. Ọ nwere ike ịbụ mma agha ihu abụọ. Were ụlọ ọrụ ihe nkiri dịka ọmụmaatụ. M na-aga fim mgbe ndị enyi m gwara m na ha ahụla fim ma hụ ya n’anya. Na tụgharịa n'akụkụ, mgbe m obi ụtọ banyere a nkiri na-enweta a ọjọọ akụkọ site na a enyi, M na-eme kpọmkwem abụghị.
M na-eche ma ọ bụrụ na nke a dị ka ogologo na-aga n'ihu na blọọgụ na weebụsaịtị?